Waa kuma wasiirka keliya ee Soomaalida ah ee kujira Wasiirada cusub ee Itoobiya? | Warbaahinta Ayaamaha
Waa kuma wasiirka keliya ee Soomaalida ah ee kujira Wasiirada cusub ee Itoobiya?
MUQDISHO-AYAAMAHA-Raysal wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed ayaa maanta ku dhawaaqay Golihiisa Wasiirada ee xukuummaddiisa u maamuli doono shanta sano ee soo socota.
Waa siyaasi muddo dheer ka soo dhex muuqday Siyaasadda Itoobiya, haatana waxa uu noqday wasiirka keliya ee Soomaalida ah ee soo noqday.
Maantana oo taariikhdu tahay 6-da Oktoobar 2021 waxaa uu Raysal wasaare Abiy Axmed markale u magacaabay isla wasiirka Maaliyadda.